LEGO အဟောင်းရှိသည် Marvel TeasedaWhat If ... ? ဇာတ်ကောင်?
04 / 09 / 2021 04 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 180 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown, 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, Reddit, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
၏လတ်တလောဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? အသက်ကြီးလာတဲ့အခါပြန်လှောင်ပြောင်ခံရနိုင်တယ် Lego Doctor Strange Sanctum Sanctorum အစုံ။
မှော်ခေါင်းကြီးart၏ Marvel Cinematic Universe ၏ Sorcerer Supreme သည်နှစ်ခုသာရရှိခဲ့သည် Lego Marvel မော်ဒယ်များသည် ၂၀၁၆ တွင်ပွဲ ဦး ထွက်ကတည်းကဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက ၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown ၌ပြသခဲ့သော်လည်း Doctor Strange's Sanctum Sanctorum ၇၆၀၆၀ တွင် ဒါကအပြင်ကလာတော့မယ် 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ.
အဆောက်အ ဦး အတွက်ပွဲ ဦး ထွက်ပုံစံတွင် minifigures သုံးခုနှင့် sanctum ၏အလယ်ပြတင်းပေါက်အပါအ ၀ င် diorama တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ဘေးဘက်တွင်တော့ arcane rune သည်သူရဲကောင်းများကိုဖမ်းရန်ကြိုးစားရင်းထူးဆန်းသောအနီရောင်ဖျောက်ဖျက်ထားသောမျက်လုံးများနှင့်ပြူးထွက်နေသောတံခါးပေါက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
ဒီမြင်ကွင်းကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတစ်ခါမှမပြခဲ့ဖူးပေမဲ့နောက်ဆုံးအကောင်တစ်ခုထဲမှာဆင်တူတစ်ကောင်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် Marvel Cinematic Universe စီမံကိန်းများ
p အဖြစ်art of Marvelသူတို့ရဲ့ကာတွန်းကားရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကဘာဖြစ်မလဲ ... ? Sorcerer Supreme ၏အခြားဗားရှင်းတစ်ခုသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသတ္တဝါများစွာကိုစုပ်ယူခြင်းဖြင့်စကြဝာ၏မှော်အတတ်လျှို့ဝှက်ချက်များသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် arcane runes များဖန်တီးသော portal မှပေါ်ထွက်လာသော tentacled monstrosity ကိုပါ ၀ င်သည်။
ဒီအသံနဲ့ရင်းနှီးမှဖြစ်သင့်တာက ၇၆၀၆၀ Doctor Strange's Sanctum Sanctorum မှာတွေ့ခဲ့တာနဲ့ဆင်တူပြီးဖြစ်နိုင်ချေတူတဲ့သတ္တဝါပေါ်လာနိုင်တယ်။ အားလုံး Reddit တွင် သုံးစွဲသူသည်ဤသတ္တဝါသည် p ဖြစ်နိုင်ချေကိုဖော်ပြသည်art နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်အတွက်အသုံးမပြုခဲ့သောအစောပိုင်းဇာတ်ညွှန်းတစ်ခု
ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး Lego အဖွဲ့သည်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားမကြံစည်မီသို့မဟုတ်၎င်းသည်မတော်တဆဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်မီနှစ်များကိုလှောင်ပြောင်ရန်စီမံခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်မလဲ ... ? p တွင်သီးသန့် minifigures ငါးခုရှိသည်art of 71031 Marvel စတူဒီယို.
← Shang-Chi ကဒီ LEGO ကိုဖန်တီးဖို့လုပ်နေတာလား Marvel minifigure ကပိုအဖိုးတန်လား။
LEGO မှ minifigures များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ Batman မင်္ဂလာပါ →